Ijipiti: Mutungamiri wePurezidhendi wekusungwa 560 - TELES RELAY
HOME » KWEZVISUNGO »Ijipiti: Mutungamiri wePurezidhendi wevasungwa 560
Mutungamiriri weEgypt Abdel Fattah al Sissi akamupa nyasha Vasungwa ve560, kusanganisira vazhinji vevasungwa vakapomerwa kuti vanotsigira musangano weMuslim Brotherhood, vakadzidza Chishanu kubva pamatongerwo enyika. Maererano nemamwe mabhuku, 482 akanganwirwa akanga aiswa mutirongo nekuda kwezviitiko zvakabatana nehama, akadaro akarambidzwa. Mumwe munyori wenhau akazvinyorwa, Abdel Halim Qandil, akatongerwa muna 2017 kusvika kumakore matatu ari mujeri nekuda kwekuzvidza dare, uye akabatsirwawo nechiyero ichi chenyasha, chakabudiswa musi weSvondo manheru muNhizha Yenyika.
»VERENGA ZVIMWE - Macron inopa chikamu chake chekutanga mutungamiri wepurezidhendi
Human Rights Watch inofungidzira zvishoma ne60.000 nhamba yevasungwa vakaiswa mutirongo nekuda kwezvikonzero muEgypt. Sissi, uyo akauya kutonga muna 2014 mushure mokusundwa kwaMohamed Morsi, purezidhendi weMuslim Brotherhood, anovimbisa kuti hakuna vasungwa vezvematongerwo enyika muEgypt. Vatsigiri varo vanotsanangura kuti kudengenyeka kubva ku2014 kwaidiwa kusimbisa Ijipiti mushure mokumutswa kwe 2011 pamusoro pehurumende yaHosni Mubarak.
Nyaya iyi yakatanga kutanga http://www.lefigaro.fr/flash-actu/egypte-grace-presidentielle-pour-560-detenus-20190517